Novidiako Solosainako, Amin'izao Fotoana Inona?
Fotsiny ianao nividy fa vaovao, ampiasaina, na refurbished laptop sy vonona ny hahazo tao amin'ny matevina zavatra. Vao aiza ianao manomboka? Get ampiasaina ny manasongadina ny kahie Tsirairay laptop dia manokana manasongadina mifototra amin'ny manufacurer, modely, sy ny taona. Hahazoana antoka fa fantatrao ny fototra toy ny ahoana ny fomba "feo" ny laptop,(na maka azy any fampiatoana ny) - ahoana no mba hanitsy ny hazavana ary fanamafisam-peo sns. Io dia fotoana tsara nandany satria ianao mbola manohy ny fampiasana ny laptop. Amin'ny tranga iray refur...
Nampiasa Solosaina finday vs. Refurbished Solosaina Fitondra Mandehandeha – Inona&#8217;s Ny Fahasamihafana?
Naharay io fanontaniana io omaly sy te hanampy hanazava ny dikan'ny hoe ny sasany amin'ireo mpamaky izay mety manontany tena zavatra mitovy. Nampiasa Solosaina finday Nampiasa solosaina fitondra mandehandeha, araka ny anaran-kevitra, dia solosaina fitondra mandehandeha izay efa ampiasain'ny orinasa na olon-tsotra, ary dia resold hafa olon-tsotra na orinasa. Tahaka ny nampiasa fiara, ireo kahie ho tonga ao ny fepetra isan-karazany sy ny sehatra ao amin'ny fandehan'ny. Ao ny indostria, nampiasa solosaina finday ho tonga ao 3 sokajy samihafa "Amin'ny maha-dia" 7 andro, (na mitovitovy amoun...
Inona No Heriny Avy Bluetooth Ny Teknolojia?
Ny Bluetooth ny teknolojia dia tsy misy mpampitohy ny fifandraisana izay mivelona toy ny onja-peo, mampiasa ny iray tarika voafaritra ao amin'ny 2.4 GHz. Ity fatetika dia azo ampiasaina amin'ny tsy misy ny famahanana. Ny Bluetooth ny teknolojia dia mamela roa fitaovana mifandray wirelessly amin'ny ankilany, ary izay mampiditra ny fampiasana "[object Window]" endin'ovy. Ireo endin'ovy dia afaka mora foana any amin'ny ankamaroan'ny tsotra fitaovana elektronika toy ny solosaina fitondra mandehandeha, momba ny finday finday, solosaina, [object Window], sns. Maro ny heriny amin'ny fampiasana Bluetooth tsy misy mpampitohy ny teknolojia. ...
Miantsena Ho Mora Kahie Solosaina.
Tena tsara mora kahie solosaina dia mety ho azo avy amin'ny fanaovana ny fikarohana systematically alohan'ny handeha hividy iray. Manao nivoaka ny specifications fa tianao ho mora ny kahie solosaina ao anaty lisitra. Mandehana throufgh ny lisitry ny thoroughly, ny famafana an'ireo zavatra ianao dia tsy mila realy. Raha toa ka ianao miandry izay ho mora kahie solosaina, misy vitsivitsy ny resaka mba ho tena avy izany ianao dia aza skimp amin'ny kalitao. Solosaina dia nitombo toa ka efa mahazatra ao amin'ny fiainantsika fa izahay avy ny fotoana ...
Ianao izay nahita azy ireo anaovana dokambarotra fatratra an-tserasera tamin'ny plummeting vidin-javatra, ianao izay nahita azy ireo amin'ny elektronika mitahiry toy ny Tsara indrindra Hividy sy Circuit Tanàna, ary na dia tamin'ny Sam ny Club sy ny Costco. Ry zareo efitra efijery televisions, ary izy ireo fa handeha ho lasa zava-dehibe ao 2009, rehefa rehetra broadcasters hiova nandritra mba purely nomerika ny rafi -. Efitra Efijery TVs no stabilized amin'ny avo kalitao HAZAVAN'NY displays. Nisy ny HAZAVAN'NY (Rano Crystal Seho) misy an-tapitrisany efitra (pixel singa) fa ny crystallize wh...
Dump Ny Sehatr'asa Sy Mahazo Ny Anankiray Amin'ireny
Ny HP Tranoeva dv9000t laptop dia tonga ary tonga packing marobe téllez. Miaraka amin'ny farany Intel Fony 2 Duo ratsy, ny zom-100GB mafy mihatra, 17 isaky ny santimetatra glossy seho, ary ambonin'izany rehetra off, iray HD-DVD kapila fa milalao ny farany ambony famaritana sarimihetsika, na izany aza dia tsy any amin'ny ambony indrindra ny famahana olana. Ity horohorontany nahatratra 7.8-pound HP kahie tsy vitan'ny hoe manana ny fahefana, kanefa toa tsara ihany koa. Amin'ny shiny mainty vita avy any ivelany sy ny volafotsy ao anatin'ny, ity rafitra ity dia afaka mandray an-tànana fotsiny ny momba ny anythi...
Inona Ianao No Mila Ho Fantatra Raha Ny Fividianana Laptop
Rehefa ny olona miresaka momba ny solosaina fitondra mandehandeha, ny tsirairay assumes izay rehetra solosaina finday dia tsy misy mpampitohy. Niara-dia tamin'ny laptop mora androany noho ny azy indray dia ny, ny solosaina dia efa saika kely sy lighter. Ny vaovao finday solosaina fitondra mandehandeha manao computing mora ho an'ny olona maro. Rehefa fividianana laptop, toky amin'ny fifandraisana tsy misy mpampitohy dia natsangana tany amin'izay ianao afaka mifandray amin'ny aterineto raha toa ianao ka ao anatin'ny tsy misy mpampitohy faritra. Ny laptop tianao ny lehibe solosaina desktop; fa ny solosaina finday mila manome ny abilit...
Finday na ny PDA?
Ny fe-potoana finday dia lasa nondescriptive androany ny portable ny periferika. Ny sampana misy tato ho ato dia manao mihoatra noho ny vao manao sy mandray antso an-tariby. Miaraka amin'ny mandrakizay fampihenana ny vidin'ny vokatra elektronika, zavatra toy ny fakantsary, Ny GPS, tetiandro, ary antsoy ny managers lasa misy aza ny mora indrindra ny hanaraka ny modely. Misy toy izany tsipika manify eo amin'ny asa iray ny finday sy ny Manokana Nomerika Mpanampy, fa angamba ny teny hoe "finday" dia nianjera avy amin'ny wayside! Ny fomba c...
Zafindraony mafy kapila ([object Window]) dia tsotra mafy kapila fitted amin'ny buffer lehibe na ny fahatsiarovana ny cache fa tsy mila spinning kapila fandraketana ny data. Ity "tsy volatile" endrika safo-arika dia tafiditra ao anatin'ny HHD ao increments hatramin'ny iray gigabyte, ka sarotra kapila fa ataon functions mba miverina amin'ny laoniny ny fahatsiarovana ny cache. Ny "[object Window]," na discs ao zafindraony mafy kapila ireo noho izany ilaina mba crank miakatra sy izao ihany rehefa buffer'ny arika dia nameno na rehefa ny solosaina op...
Tehirizo Amin'ny Fahitalavitra No Mampiseho Raha Fialantsasatra
Ianao angamba tsy mahafantatra izany fa misy dia tena tsara vintana fa ny nomerika amin'ny lahatsary recorder no manana ny fahafahana mety programmed fandraketana manokana amin'ny FAHITALAVITRA no mampiseho avy amin'ny toerana hafa noho ny efitra fandraisam-bahiny. Mety feo somary hafahafa tamin'ny voalohany fa avelao aho dia miezaka manazava ny fomba io dia miasa. Ianao indrindra indrindra fa ny tsara vintana raha toa ka ny lahatsary nomerika recorder mitranga ho TiVo. TiVo dia manome an-tserasera sampan-draharaha fa dia mamela anao hampiasa ny TiVo nomerika amin'ny lahatsary recorder manerana ny Aterineto. Amin'io fomba io...
Portable angovo azo avy amin'ny masoandro fahefana any an-toerana mety feo, ny sasany, toy ny nofy. Izy ireo dia afaka mieritreritra ny maro amin'ny toerana portable masoandro dia mety ho ilaina, toy ny RV izy ireo tia haka filasiana, na ny sambo izy ireo ampiasaina ho ela fanjonoana fitetezana ny tontolo. Izy ireo dia tsy afaka an-tsaina, aza, fa portable angovo azo avy amin'ny masoandro ny angovo amin'ny biraom-marina ve misy.. Portable angovo azo avy amin'ny masoandro fahefana any an-toerana dia maro tsotra mampiasa, izay isika dia hiresaka momba taty aoriana, fa inona no portable herin'ny masoandro? Fanoritsoritana Portable Masoandro ...
Dia Jereo Ny Boky Mitondra Fiara Lavitra
Ity no lahatsoratra iray momba ny maha-izy azy ny halatra, solosaina-bola hosoka, ary ny olona nitora-mandositra ny trano amin'ny solosaina miaraka amin'ny rehetra ny ara-bola sy ara-bola vaovao mora azo idirana
Ahoana No Misafidy Dvd Mpilalao
Raha mividy ho an'ny tenanao na ny fanomezana ho an'ny olona tiana iray, ny ahitana fotsiny ny zo DVD mpilalao tsy mora jerena izany tsy akory. Misy maro ireo lamina, sizes sy nanampy ireo ho an'ny DVD mpilalao androany fa mety sift amin'ny alalan'ny an-jatony mpilalao alohan'ny hitady ny zo iray amin'ny ankavanana vidiny. Mampiasa ity faingana torolalana mba hampitaha ny karazana DVD mpilalao misy momba ny elektronika tsena. DVD Mpilalao Sizes Hamaritra izay haben'ny mpilalao mila. Raha toa ka ianao no mampiditra ny DVD iray mpilalao mba y...
Ny hevitra fividianana manokana solosaina dia mety ho appealing ho maro ny olona, na izany aza dia mety mahatsapa undecided toy ny toetr'andro ny handeha ho an'ny nentim-paharazana ny desktop solosaina na ho maivana ny lanjany portable kahie. Maro ny lafiny tokony ho alaina anaty kajikajy ny resaka toy izany fividianana. Raha ny tena tanjona mividy solosaina dia ho occasional ampiasaina, tsy ijerena raha izany no ho asany na ny fialam-boly ny asa, ny iray mety mihevitra ny mividy nentim-paharazana sehatr'asa solosaina mandray...
Fikarakarana Ho Anao Laptop
Taorian'ny fandaniana ny mafy nahazo vola amin'ny kahie pc, ary relying on izany amin'ny karazana fomba, fotoana vitsivitsy tokony ho nandany ny mijery rehefa ny fampiasam-bola mba hahazoana azy io hiasa kokoa efficiently, ary prolong ny fiainana. Ny Efijery ny Sasany kahie tonga tamin'ny azy manokana ny fanadiovana cloth. Raha toa ka tsy, miangavy anao an-toerana pc store momba spray na izay tsara indrindra ho an'ny fanadiovana ny seho. Tsy mampiasa ny tokantrano an-tokantrano ny mpanadio. Ho lasa toeram-pialan-tsasatra sy raha toa ny teti-bola lotra no, fotsiny ny mampiasa ny iray damp cloth. [object Window].
Raha toa ianao ka te-hahazo any amin'ny portable revolisiona, dia iray amin'ireo tsara indrindra safidy dia misy mijery manodidina ny aterineto ho nampiasa solosaina fitondra mandehandeha. Mihevitra ve ianao fa ny solosaina mitovy fomba maro amintsika ve: iray mbola kely solosaina portable fa afaka manokatra sy akaiky toy suitcase, amin'ny rehetra ny fananana fahaiza-manao iray sehatr'asa. Acer solosaina fitondra mandehandeha manana ny tsara mendrika ny lazany noho ny sasany amin'ireo tsara indrindra solosaina fitondra mandehandeha manerana izao tontolo izao. Refurbished solosaina finday dia efa nisy hatry ny ela ary dia mbola s...
Mijery Zanabolana Tv Amin'ny Solosainao
Raha an-tranonao, dia fitaovana iray mandeha amin'ny zanabolana sakafo ho an'ny FAHITALAVITRA no mahita, fantatrao ny fomba enjoyable azo. Iray azy ao manerana ny firenena ary ny iraisam-pirenena famolavolavolana safidy, hatramin'izay ny zava-mitranga izay tsy amoahana ao amin'ny tariby ny tambajotra, maro zanabolana fampielezam-peo sy ny maro hafa rehetra dia ampifanampiana tsy misy tombontsoa ho anao familys mahita sy mihaino ny fahafinaretana. Fa inona momba ny fandaniana amin'ny fananana maro nomerika receivers ao an-tranonao, indrindra fa rehefa ny tsirairay matetika nahangona tao ...
Mampitaha Sony Solosaina Fitondra Mandehandeha
Misy telo ny solosaina finday izany Sony manome an'ireo izay maniry ny hividy iray mahomby solosaina fa afaka haka ny miaraka amin'izy ireo ho an'ny fandraharahana, fialantsasatra, ary maro ireo toerana hafa. Solosaina finday dia tonga lafatra ho an'ireo izay ao amin'ny nandeha na ireo izay maniry ny flexibility amin'ny fampiasana ny solosaina any amin'ny toerana samihafa. [object Window], UX tantara Mitohy, TX tantara Mitohy, ary SZ Mitohy ny solosaina finday dia tonga lafatra ho an'ireo izay tsy mila loatra ny fahatsiarovana na ny sary sy ny feo fananana fahaiza-manao ho toy ny olona hafa. Ireo solosaina mampiasa ny Fandresena...
Inona Ianao Dia Mila Mahafantatra Ny Mikasika Ny Bluetooth Headphones
Bluetooth headphones sy ny kojakoja dia iray amin'ny haingana mitombo fironana elektronika ny teknolojia ankehitriny. Ireo kasinga kely fa antonona snugly ny ear ireo fast lasa ny mafana fanaka hijery ny fitaovana elektronika mba manokana raha toa ianao ka te hifaninana. Ity tanana-poana ny fahafahana mifandray amin'ny hafa headphones, [object Window], solosaina fitondra mandehandeha, ary ankehitriny, iPod teknolojia mahatonga izany ny iray amin'ny haingana mitombo mpanjifa purchases. Bluetooth headphones tonga amin'ny karazana modely sy ny vidiny ranges. Ho an'ny fomba...
Bluetooth Manokana Faritra Tambajotra
Manokana faritra tambajotra, na PAN, dia fanangonana ny serasera ara-teknolojia ny periferika ao anatin'ny elanelana olona iray. Raha ny fifandraisana eo amin'ireo fitaovana dia tsy misy mpampitohy, ny hoe lasa WPAN, na tsy misy mpampitohy manokana faritra tambajotra. Raha ny zava-misy, ary ho an'ny rehetra fampiasa amin'ny resaka, indrindra manokana amin'ny faritra misy ny tambajotra dia tsy misy mpampitohy. Noho ny resaka, ity lahatsoratra ity dia mihevitra ny faritra manokana ny tambajotra araka ny maha-tsy misy mpampitohy. Mifanohitra ao an-Toerana dia Faritra ny Tambajotra sy ny Sakany Faritra Tambajotra, ny manokana iray...
Fax milina foana teo afovoany mba matotra ny fifandraisana. Misy ny tena koa tsy misy fomba haingana mahazo ny antontan-taratasy izay mila mankany ry. Indrisy, mampiasa fax milina dia tsy mora ny asa. Na iza na iza manana mandrakizay ampiasaina iray tany aloha dia tokony ho fantatrareo ny momba ny fanelingelenana mitarazoka ny izay maka ny vaovao taratasy, ny fiovana vaovao ny toner cartridges, ary mazava ho azy fa ny hirifirin'ny randomly mikapoka azy rehefa rehetra-kafa tsy voasakan'ny.
Impiry ianao no niaina izany sickening fahatsapana rehefa ny kapila mafy tampoka tsy voasakan'ny? Impiry ianao no niaina izany fa ny dur fotsiny dia tsy ny boot sy izay rehetra data dia mety ho lasa mandrakizay? Sarotra kapila tsy iray tena olana iraisana sy ny nofy ratsy indrindra atrehan'ireo solosaina mpandraharaha manerana izao tontolo izao. Sarobidy data dia very na ao an-trano na ny lehibe vondron'orinasa environments. Ny zavatra azo atao any amin'ireo toerana? Tsara, misy ny sasany vahaolana tha...
Ny vadiko tonga tao an-trano avy niasa ny andro hafa tena tezitra. Izy miasa ho an'ny banky ao ny antoka nataonao Departemanta ary izy ireo dia nomena azy ho tafalatsaka ho azy ampiasaina amin'ny asa. Ny olona dia nandefa ny mailaka fa nanana mahaliana manely ny mpanaraka, noho izany izy dia nanokatra izany. Izany dia tsy ho ela talohan'ny zavatra rehetra nanomboka any ho diso miaraka amin'ny solosaina. Tsy vitan'ny no nisy maro pop-tafalatsaka fa nisy naka an-toerana avokoa ny fotoana rehetra fa ny solosaina dia slowed iray crawl. Toa hita fa nisy maro viruses sy ny sp...
Ny Hanampy Ny Mampiasa Ho Tahaka Ny Vata Typewriter
Ao amin'ny nampiasana ny teknolojia avo lenta amin'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny solosaina ao amin'ny isaky ny sehatr'asa, solosaina fitondra mandehandeha, palm mpanamory, momba ny finday finday, ny andro typewriter toa niserana. Noho izany, dia misy mbola misy mampiasa ho typewriter?
Torolalana momba ny Fividianana Laptop Solosaina
Miaraka amin'ny maro samy hafa ny marika sy hanaraka ny modely ao an-tsena, mividy amina laptop na kahie solosaina may tamin'ny voalohany dia toa confusing...
Aho Vao Nahazo ny Marika Vaovao Kahie!
Aho tsy ela akory dia nahazo iray 17 isaky ny santimetatra kahie, ary mino aho somary gaga miaraka amin'ny kalitao.
Dingana Lavitry Ny Solosaina Alohan'ny Ianao Manana Ara-Tsaina Meltdown
Lahatsoratra iray momba ny fomba fampiasana ny teknolojia ary ny fandraharahana azo addictive ary andaniana fotoana. Ahoana ny fampiasana ny teknolojia fandraharahana afaka tokoa ny rarin-tsaina ianao ivelany raha toa ka tsy dingana lavitra izany indraindray.
Refurbished solosaina fitondra mandehandeha dia ny tsara indrindra mba hisafidy raha ianao no mitady hividy ny vita sy ny solosaina finday mora vidy. Ity lahatsoratra ity, miresaka mikasika ny endrika samihafa ananan'ny refurbished solosaina finday ary manampy anao hisafidy ny zo iray ho anao.
Mahazo Mifandray Wi-Fi
[object Window], fohy ho an'ny tsy misy mpampitohy ny fanajana ny fanambadiana dia manondro toa ka tsy misy mpampitohy amin'ny tambajotra teknolojia ny marimarina niainga ho misy karazana 802.11 tambajotra, 802.11b ary iray 802.11, ny zom-tarika. Ny teny Wi-Fi no naorina ny fikambanana antsoina hoe Wi-Fi Alliance. Izy ireo overlook ny fitsapana izay manamafy ny famokarana.
[object Window]! Dimy Fototra Fiasana mba Hieritreritra Momba ny
Ny overwhelmingly lehibe habetsaky ny fiasana any ivelany, azo itokiana goavana ho isa hivoaka ny inona ianao no tena ilàna ny solosaina finday.
Maka Ny Anao 17 Isaky Ny Santimetatra Kahie
Aho vao nandeha nivoaka sy nividy 17 isaky ny santimetatra kahie, ary hatramin'izao no mbola sondriana ny kalitao. Izany dia tena ho ambony ny taloha IBM Thinkpad aho fa an'ny taona lasa izay.
Ahoana No Mba Hisafidy Ny Tsara Indrindra Amin'ny Finday Drafitra
Sarotra ny Kapila Data ezaka fanarenana Tsy&#8217;t Mila Mafy
[object Window] / [object Window]: Mampitaha OSPF sy ny ISIS Hellos
[object Window], ny Cadillac ny Headsets
Ahoana no Hanatsarana ny Fahaiza-manao Poker
3 Fomba Manomana Ny Tenanao Ho An'ny Windows Vista
Torolalana Mba Hividy Fakantsary Nomerika
Mianatra Photoshop 7 Ny Fampiasana Ny Aterineto Tutorials
Nampiasa Solosaina (Desktops/Solosaina Fitondra Mandehandeha) Inona No Hitadiavana?
Mampiasa Ny Silicone
Maimaim-poana ireo sary mitsitsy antoka apetraka?
Ambony Paosy PC: IPAQ Paosy PC HX4700
Manasongadina Ny Mpilalao MP4
1 / 512345Manaraka"